Ingqiqo yesikolo saseMontessori kunye ne-Montessori kindergartens
Ukufunda nazo zonke iinjongo - i-1000 eyaziwayo eMontessori
Izikolo zaseMontessori kunye neenkulisa zaseJamani
"Ndibancede ukuba ndiyenze ngokwam", ingqiqo kaMontessori - Umfundisi waseMontessori ubuyela kwi-pedagogue noogqirha uMaria Montessori. Le 1870 yazalwa eItali kwaye yayivela kwikhaya elihle-eliphakathi.
UmKristu ufundiswe kwaye wayehamba kakuhle, wayezibophelele kakhulu kumalungelo amabhinqa namalungelo abo. Wayesebenza esibhedlele nabantwana abakhubazekile ngokwengqondo, kodwa wafumanisa ukuba babezimisele ukufunda nokumkela, kodwa ngoku bengenalo ngqiqo.
UMaria Montessori wavelisa izinto eziphathekayo ngokukhethekileyo kubantwana ukuba bancede abantwana baphuhlise. Ngokusekelwe kulo, i-Montessori yokufundisa iqhutywe kule minyaka. Ingcamango eyintloko yoqeqesho lonke ngumgaqo owaziwayo: Ndincede ukuba ndiyenze ngokwam!
Yintoni ebangela iMedessori yokufundisa?
I-Montessori yokufundisa ibeka umntwana kwindawo ephakamileyo yemfundo, umntwana ungumakhi wakhe oyintloko kunye nesishukumiso ngesimo somvuzo kunye nesohlwayo asikho imfuneko. Abantwana, ngokulandela abalandeli bakaMontessori, bafuna ukufunda ngokwabo baze baqhubeke ngaphakathi, kuba igalelo lokuzifaka kwihlabathi elidala lizimisele.
Ngokusekelwe kwezi ngcamango, izikolo zaseMontessori zifundisa umsebenzi omkhulu wamahhala kunye nezifundo ezivulekileyo. Izifundo zinika igumbi lomntwana ukuzama nokufumana amava. Umntwana eneetalente zakhe ngaphambili, unquma ukuhamba kwexesha lokufunda kwaye uvelise kwisigqi sakhe. Kunoko, kulawulwa kuphela ukuxelisa izinto.
Ngokomzekelo, kwi-kindessart Montessori, abantwana bayakhuthazwa ukuseta itafile ngokubukela ngokuphindaphindiweyo kwaye ngexesha elithile bazama ukuzinceda.
Imfundo yaseMontessori ihlula ukuphuhlisa umntwana zibe zigaba ezintathu. Isigaba sokuqala sabantwana (iminyaka eyi-0-6), isigaba sesibini sezingane (i-8-12 iminyaka) kunye nentsha (iminyaka ye-12-18). Kuzo zonke izigaba zintathu iinjongo zidlala indima ebalulekileyo, kuba abantwana banomdla wokwenkqonkqenkqeza, bathabathe kwaye bathele yonke into.
Ukuqonda ngendlela engokoqobo ingcamango engundoqo kwizikolo zaseMontessori kunye nabantwana bokufundela. Ukufunda kuya kulungiswa ngentsingiselo kunokuba kungabonakali, ngoko ukufunda bekuya kuba ngcono, bathetha abavakalisi. Ngoku kugxininiswa kwiingqondo, izinto ezizodwa zokufunda ziphuhlisiwe. Kwiimathematika, umzekelo, iipereleji zeparele zisetyenziselwa ukwenza iinombolo eziqondakalayo, oko kukuthi, okubonakalayo. Iibhloko zeeparele ezinezixhobo ze-1000 zifanekisela amaninzi aphezulu kwaye vumela umntwana ukuba acinge kangangoko ubukhulu becala - kungekhona nje entloko, kodwa naye uvakalelwa.
EJamani, kumaziko okunakekelwa kwelanga le-600 asebenza ngokubhekiselele kwingcamango kaMaria Montessori. Ekuqaleni kwe-2013 kwakukho izikolo zaseprayimari ze-225 nezikolo eziziisekondari ze-156 ezi landela le migaqo. Izikolo zihlala zizimeleyo kwaye zibeka ukuphuhliswa komntwana kwiziko leenjongo zabo.
Uninzi lwabagxeki lubona ukutshintshwa kweso sikolo saseprayimari saseMontessori ukuya esikolweni sesibini njengengxaki. Nangona kunjalo, kuboniswe ngethuba elidlulileyo ukuba abantwana abanalo ubunzima. Iziqulatho zekharityhulam azifani nazo zesikolo eziqhelekileyo, kodwa indlela ibalulekile, umntwana ufunda njani umxholo.
Umsebenzi wamahhala, ukhetho lomlingani, umsebenzi weqela, ukufundisa okuvulekileyo ngethuba elininzi lokunyakaza, ixesha elifanelekileyo linye yimiba edlalwa kwizikolo zaseMontessori. Ekugqibeleni, umntwana unenzuzo kule miqathango kuba ufunda ukusebenza ngokuzimela.